I-Realme X: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusemthethweni | I-Androidsis
Ngokwenene unonyaka ophambi kwakhe obaluleke kakhulu. I-brand ilungiselela ukwazisa iifowuni zayo eYurophu kwisithuba seenyanga ezimbalwa, elikhuphisana nalo elitsha kwiimpawu ezinje ngeXiaomi. Kwezi veki zidlulileyo uphawu lubonise iimodeli ezininzi, njenge-3 Pro, iflegi yayo entsha yoluhlu oluphakathi. Ngoku, basishiya neReal X.
Iiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwaqinisekiswa ukuba le Realme X yayiza kuya ikhona ngoMeyi 15. Si Zonke iinkcukacha malunga nolu luhlu lutsha lweprimiyamu Kwintengiso. Ifowuni ekunokwenzeka ukuba iphehlelelwe naseYurophu. Yintoni esinokuyilindela kwesi sixhobo?
Ifowuni iza noyilo kunye nekhamera engaphambili ehlehlekayo, Enye yeefashoni zanamhlanje kwi-Android. Sikwazile nokuyibona kunye ne-OnePlus 7 Pro kule veki. Ngale ndlela, isikrini sefowuni sithatha ithuba elingaphambili, kuyilo-lwescreen sonke. Iikhamera ezininzi zisilindile ngasemva.
1 Ukucaciswa kweRealme X
Ukucaciswa kweRealme X
Le Realme X iboniswa njengenketho esemgangathweni ngaphakathi kuluhlu oluphakathi lweprimiyamu. Uyilo lwala maxesha, luza neekhamera ezilungileyo kunye nezinto ezilungileyo ngokubanzi. Ke inokuthanda okuninzi, ngakumbi kuba iyakufika inexabiso elifanelekileyo lemali, nto leyo eyenza ukuba inomdla ngakumbi. Oku kukucaciswa kwayo:
IsikriniI-AMOLED 6,53 intshi nge-FullHD + resolution 2.340 x 1.080 kunye ne-19,5: 9 ratio
Cámara traseraI-48 MP nge-f / 1.7 + 5 MP f / 2.4 ene-HDR
Inkqubo yokusebenzaI-Android 9 Pie ene-ColourOS 6.0
Ibhetri: 3.765 mAh ene-20W VOOC yokuTyala ngokukhawuleza
Conectividad: Dual 4G, WiFi 5, Bluetooth 5, USB type C, aptX and aptX HD, LDAC
abanye: Iscreen somfundi weminwe esikrinini, vula ubuso
UbukhuluUbukhulu: 161.3 x 76.1 x 8.55 mm
U bunzima: Iigram ezili-191
Sifumana isikrini esikhulu emnxebeni, esetyenziswa ngakumbi nangakumbi kukungabikho kwenotshi kuyo. Ke sinokulindela amava okuntywila kwiscreen xa sisebenzisa umxholo. Iikhamera yenye yamandla ale fowuni. Ikhamera ephindwe kabini kuyo, Nge-MP eyi-48 njengeyona iphambili, into esiyibonayo kakhulu kwi-Android namhlanje. Ngaphambili, kusetyenziswa enye ye-MP eyi-16, ngenkqubo leyo erhoxisiweyo
Kwelinye icala, le Realme X isishiya sinebhetri elungileyo ye-3.765 mAh. Ngokudibeneyo ne-Snapdragon 710 kunye nobukho be-Android Pie, isithembisa ukuzimela okuhle ngalo lonke ixesha. Ukongeza, ibhetri ifika ngokukhawuleza okukhulu ngalo lonke ixesha. Isixhobo siza nazo zombini inzwa yeminwe, ethi kule meko idityaniswe kwiscreen, kunye nokuvula ubuso. Ke abasebenzisi baya kuba nazo zombini iindlela ezikhoyo kwifowuni. Inketho elungileyo ngaloo ndlela.
Okwangoku, ukumiliselwa kwale Realme X sele kubhengeziwe ngokusemthethweni e-China, apho uphawu luqala khona ukwazisa iifowuni zabo kwezi veki zimbalwa zizayo. Izakuba ngomhla we-20 kuCanzibe ngethuba isungulwa ngokusesikweni elizweni. Okwangoku akukho nto ikhankanyiweyo malunga nokusungulwa kwesixhobo kwezinye iimarike. Kodwa kunokwenzeka ukuba iza kuphehlelelwa eYurophu kungekudala.
Ifowuni iza ngemibala emibini, eluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe. Sikwafumana iinguqulelo zayo ngokuxhomekeke kwi-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi. Ke abasebenzisi baya kuba nakho ukukhetha iRealme X efanelekileyo ngokufanelekileyo xa bekhangela. Amaxabiso enguqulelo nganye ngala:
Inguqulelo ene-4/64 GB: iindleko ze-1.499 yuan (malunga nee-euro ezingama-194 zokutshintsha)
Imodeli ye-6/64 GB ixabisa i-1.599 yuan (malunga ne-207 euro ukutshintsha)
Inguqulelo ene-8/128 GB inexabiso kwi-1.799 yuan (malunga ne-233 euro ukuyitshintsha)
I-Realme X yoHlelo oluKhethekileyo 8/128 GB: 1.899 yuan (malunga nama-246 eeuros zokutshintsha)
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Realme X: Iphrimiyamu entsha yohlobo lwebhrendi